Anbotek sistemụ ọchụchọ
1. Dejupụta aha onye chọrọ na akwụkwọ asambodo nke ịchọrọ ịchọrọ na igbe ntinye (biko tinye nọmba mkpesa naanị maka akụkọ ahụ, yana okwuntughe nbanye bụ ụbọchị nke emechara ikpe ahụ, ụbọchị, ọnwa na afọ. Ọ bụrụ na akwụkwọ akwụkwọ asambodo na June 11, 2017 mechiri, paswọọdụ nbanye bụ 11062017).
2. Biko ejirila oghere oghere mgbe ị na-edejupụta ya.
3. Asambodo agabigaghị akwụkwọ Anbotek esoghi na nyocha.
4. Ọ bụrụ na gị akwụkwọ bụ adịghị ma, o nwere ike ịbụ na gị akwụkwọ na-adịghị banyere anyị nchekwa data. Biko kpọtụrụ anyị.
N'ihi na nzuzo ụkpụrụ nke ndị ahịa ozi, nke a ase usoro nwere ike na-egosi na ndaba nke akwụkwọ nọmba ị jụrụ na nke nkiti ngwaahịa ọmụma.
Adreesị ozi ịntanetị: Ọrụ@anbotek.com
Akwụkwọ asambodo / nyocha ihe nyocha na anbotek ule nkwupụta nkwupụta:
1. Ọrụ nyocha a bụ naanị maka ndị ahịa ndị bịanyere aka na nkwekọrịta ụlọ ọrụ enyere n'aka ụlọ ọrụ anyị ka ha lelee usoro nyocha nke ihe nlele ha ma lelee nsonaazụ ule nke ihe nlele ahụ. The ikpeazụ ule results nke samples nọ n'okpuru ule akụkọ formally osụk site anyị ụlọ ọrụ ndị ahịa.
2. Na-enweghị ikike ederede banyere ụlọ ọrụ anyị, ọ nweghị onye ga-e copyomi, bipụta ma ọ bụ jiri data njirisi ajụjụ a n'ụdị ọ bụla; Na-enweghị nkwenye ederede nke ụlọ ọrụ anyị, data nyocha a anaghị anọchite nyocha ọ bụla nke ntinye ederede na otu ngwaahịa ahụ nọchiri anya ya. site n'omume, ma ọ bụ na ọ nwere ihe ọ bụla asambodo mmetụta.
3. Ọnwụ akụ na ụba nke ndị ahịa, ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ ọ bụla kpatara n'ihi ndị ahịa 'iji ikike nke ikike nke aka ha eme ihe n'ụzọ na-ekwesịghị ekwesị, ihe ọmụma na-akwadoghị nke ndị ọzọ ma ọ bụ ikike na-akwadoghị nke ndị ọzọ ga-ebu ndị ahịa n'onwe ha, ụlọ ọrụ ahụ agaghị eburu nke ọ bụla ụgwọ iwu.
4. Ọ bụrụ na onye ahịa ahụ nwere nsogbu ọ bụla na nsonaazụ ajụjụ ahụ, biko kpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị n'oge. Companylọ ọrụ anyị ga-elele ya n'ime oge izizi ma nyere aka mee ya.
5. The akwụkwọ enweghị ike ịchọta ma ọ bụrụ:
1) o nwere ike ịbụ na asambodo ahụ ị jụrụ abanyeghị na nchekwa data anyị.
2) ihe omuma ajuju nke asambodo i tinyere bu ezighi ezi; Biko lelee akwụkwọ nke akwụkwọ ahụ wee ziga ya na service@anbotek.com. Anyị ga-aza ma zaghachi ozugbo enwere ike.